खगेन्द्र संग्रौलाको कडा टिप्पणी : ‘ओली हेर्दा ज्ञानेन्द्रको झल्को, वादल हेर्दा कमल थापाको’ – सप्तरंगी एफ एम
Home / ट्रेन्डिङ्ग / खगेन्द्र संग्रौलाको कडा टिप्पणी : ‘ओली हेर्दा ज्ञानेन्द्रको झल्को, वादल हेर्दा कमल थापाको’
लेखक तथा टिप्पणीकार खगेन्द्र संग्रौलाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग तुलना गर्नु भएको छ । उहाँले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको बोलीले तत्कालीन गृहमन्त्री कमल थापाको झल्को दिएको भन्नु भएको छ ।
सरकारले पहिले शान्तिपूर्ण धर्ना र जुलुस हुँदै आएका स्थानमा भेला हुन निषेध गरेपछि व्यंग्यात्मक रुपमा लेखक संग्रौलाले कडा टिप्पणी गर्नु भएको हो । उहाँले यो निषेधाज्ञालाई हिट्लरी निषेधाज्ञा भन्नु भएको छ । संग्रौलाले गरेको ट्वीट कयौँ पटक रिट्वीट भएको छ ।
ट्वीटमा उहाँले भन्नु भएको छ, ‘ओली राजमा रत्नपार्क र मण्डलामा पनि जुट्न र बोल्न नपाइने ? विमति र विरोध बोल्ने थलो पनि शासकैले तोक्ने ? अनि यसको नाम विधिको शासन ? हैट्, प्रम ओलीको मतिमा ज्ञानेन्द्रको र गृहमन्त्री रामबादुरको बोलीमा कमल थापाको झल्को ! सुनिस्योस् प्रभु–यस्ता हिट्लरी निषेधाज्ञा तोडिन्छ !
Previous: दमक नगरको शिक्षा नियमावली तत्काल कार्यान्वयन नहुने : नगरपालीकाको नाउँमा सवोच्च अदालतको कारणदेखाउ आदेश
Next: दमक क्षेत्रमा भोली बिहान ८ बजे देखी दिउँसो १ बजे सम्म बिद्युत अबरुद्ध हुने